192.168.8.254 - Ukungena komqondisi - Igama lomsebenzisi nephasiwedi
The https://192.168.8.254 Ikheli le-IP libhaliswe ne-IANA Internet Assoned Numbers Authority njengengxenye yenethiwekhi ekude 192.168.8.0-24. Esikhaleni esifihliwe, amakheli e-IP awabelwe noma yiliphi ibhizinisi elithile futhi wonke umuntu angasebenzisa amakheli e-IP angenakho ukuvunyelwa kwerejista yesifunda ye-Intanethi njengoba kukhonjisiwe ku-RFC 1918, amakheli e-IP ahlukile.
Okuzenzakalelayo Umugqa IP Ukungena 192.168.8.254
I-IP yokuzenzakalelayo yokungena egcinelwe imodemu noma i-router engenantambo. Uzokwazi ukungena kulayini womlawuli we-router yakho ngokufaka ikhiye 192.168.8.254 ngaphakathi kwebha yekheli lesiphequluli. 192.168.8.254 isetshenziswa kakhulu ngamalebula afana ne-D-Links. Akuwona ama-IP ajwayelekile wama-routers. Kukhona amathani ama-IP amaningi ngokwesibonelo 192.168.0.1, 192.168.2.1, or 192.168.1.1, ezisetshenziselwa ukusondela kuVoIP Gateways yakho, amapaneli wokulawula. Le IP ejwayelekile ibizwa nangokuthi yi-Default IP Gateway.
Akuwona wonke umphakathi owazi i-router yabo ye-IP ngoba emicimbini eminingi kunendawo eyodwa lapho kufanele ufake i-IP 192.168.8.254. Yilapho inqubo yokusetha isetshenziswe ngumhlinzeki. Ngemuva kwalokho, awuthintani ne- 192.168.8.254. Noma kunjalo, njalo kaningi kufanele ushintshe i-SSID (amagama wamanethiwekhi e-WiFi), izilawuli zabazali, noma ama-WiFi-Passwords. Ngemuva kwalokho ufuna i- 192.168.8.254 IP. Ukulandela ukungena ngemvume ku-router uzobona amaphaneli wokuzulazula lapha okwazi ukuphatha ithrafikhi yedatha, uqonde izibalo futhi wakhe ukusethwa komzila.
192.168.8.254 udinga ukhiye http://192.168.8.254 kusiphequluli futhi lokhu kuzokuqondisa ekungeneni kwekhasi lewebhu kumaphaneli akho we-admin. Umane uhlela kabusha imodemu ibe yifekthri yefekthri uma ungabaza i-PW noma uhlangabezana nanoma yikuphi ukufana okungalungile ku-PW yakho.
Setha kabusha i-PW ye-192.168.8.254?
Konke okudingeka ukwenze ukusetha kabusha ama-modem. Lokhu kungenziwa kalula ngokuchofoza nje kukhiye wokusetha kabusha ekugcineni kakhulu noma phansi kwamamodemu. Mane ucindezele phansi le switch yomzuzu cishe amasekhondi angama-20, (ungahle udinge ukusebenzisa i-toothpick), bese imodemu ingabuyiselwa esimisweni sefektri.
Okufanele ukukhumbule ukuthi uma usetha kabusha imodemu, ungalahlekelwa ukuxhumana kwakho okuku-inthanethi. Ngakho-ke kuhle ukuthatha usizo nezeluleko zabasebenzi abanolwazi kulokhu. Uma ungenalo ulwazi oluningi, kuphakanyiswa ukuthi kufanele uthole ukwesekwa kothile onalolu hlobo lolwazi.
192.168.8.254 Ikheli le-IP ikheli lomuntu siqu le-IP. Ikheli le-IP elikude lisetshenziswa ngaphakathi kwenethiwekhi yendawo (i-LAN) futhi ayibonwa ku-inthanethi. Ikheli le-IP elikude lichazwe ngo-1918 (IPv4) RFC kanye no-4193 (IPv6) RFC.
IP ekhethekile 192.168.8.254 kungenxa yokubuyisa iphaneli lomlawuli le-router. Onke amanye ama-IP anjenge 192.168.0.99,192.168.8.1, 192.168.4.1, njll. zamukelwa ngasikhathi sinye kuma-router IPs jikelele. Ngisho kuchazwa ezincwadini njenge- "Default IP Gateway."
Umuntu angakwazi ukubhekana nezinqumo zokuphepha kahle, i-DNS, ummeleli, i-LAN, i-WAN, i-Network Management, izilungiselelo ze-WLAN, i-WPS block ADSL, i-DSL, i-MAC, i-IP QoS, nokunye okuningi.
Uhlu lwegama lomsebenzisi nephasiwedi engenzeka
D-Link (akekho) admin
D-Link (akekho) yangasese
D-Link (akekho) umphakathi
D-Link admin (akekho)